TRACEE ELLIS ROSS: UXINZELELO LOKUTSHATA KWAYE UBE NABANTWANA - TRACEE ELLIS ROSS
UTracee Ellis Ross kuxinzelelo olubekwe kwabasetyhini ukuze batshate kwaye babe nabantwana
Ubomi bukaTracee Ellis Ross buyamangalisa. Kwiminyaka engama-48 ubudala, umdlali weqonga oneziphiwo ezininzi, imvumi, kunye ne-icon enenwele eziphotheneyo engatshatanga, engenabantwana, kwaye engafezekanga. Ewe, hayi ukungathembeki ngokupheleleyo, kuba uluntu luhlala lufuna ukukhathaza.
Ngexesha le Udliwanondlebe olutsha ngokupapashwa UMarie Clare , URoss wabuzwa yi-outlet ukuba wakha waphupha ngobomi bentsapho enkulu.
Ewe, awukwazi njani? URoss waphendula. Uluntu lwethu ngecephe-luyondla kuwe. Bendimane ndizilalisa ndiphupha umtshato wam.
Wongeze wathi: Kwaye ndingayithanda yonke loo nto, kodwa ndiza kwenza ntoni, ndihlale ndilindile? Thula. Ndinezinto ezininzi ekufuneka ndizenzile.
Kwaye akuncedi ukuba kwinqanaba lakhe lomsebenzi, uye wadlala bobabini abasetyhini abanomdla wokutshata kunye nomfazi otshatileyo onengqokelela yokuqokelela abantwana.
Kumsebenzi wakhe, uRoss uneendima ezininzi phantsi kwebhanti lakhe, kodwa uyaziwa ngokudlala uGqr.Rainbow Johnson kuthotho lwe-ABC Umnyama-ish kunye noJoan Clayton kuthotho lwamahlaya e-UPN / CW Iintombi.
UJoan Clayton wayeligqwetha kwaye kamva wayengumfazi ozimiseleyo ngokutshata kwaye uchitha uninzi kuthotho ukuzama ukufumana iqabane lomphefumlo. Wenza imithetho engaqhelekanga ukuzama ukukhulisa unxibelelwano, uxhalabile ukuba nabantwana kunye nokutshata njengoko egqiba iminyaka engama-30, kwaye ngelixa engumfazi ophumeleleyo, akukho nanye kwezi ebonakala ngathi ibalulekile njengezo zikhombisi zempumelelo yemveli .
Ndamnika upopu isithembiso
NjengoGqirha uRainbow Johnson, ngumama otshatileyo ka abantwana abahlanu kwaye wabambisana nendoda engekho kwinqanaba lakhe, kodwa bayayenza isebenze, ilunge kubo.
Asinazo iindima ezininzi zabasetyhini ezingenabantwana ezibonisa ukuba bonwabile kwaye bayachuma. Kukho phantse kusoloko kukho ukusilela ebomini babo ekufuneka kuzaliswe yinto.
URoss uthethe ngale nto ngaphambili Phatha kwaye yaqaqambisa into yokuba asithethi ngayo iintlobo ezahlukeneyo zolonwabo .
Zininzi iindlela zokunqanda ulonwabo, ukufumana uthando kunye nokwenza usapho, kwaye asithethi ngazo, ucacisile. Idala ihlazo kunye nomgwebo.
Abantu batolika ngokungalunganga ukonwaba ungatshatanga ngokungafuni ukuba kubudlelwane. Ewe ndifuna ukuba kubudlelwane, kodwa ndiza kwenza ntoni? Chitha lonke ixesha ukuba andikho [in one] moping around? Hayi ndizakuphila ubomi bam ngokupheleleyo kwaye ndiza konwaba kwalapha, apho ndikhoyo.
ian mckellen gandalf magneto ihempe
Ngokuqinisekileyo, kwaye ukuba ufuna ukuthatha umtshana oneminyaka engama-29 ubudala, ndihlala ndikwimarike yomnye umakazi opholileyo.
(nge ABANTU , umfanekiso: Aaron J. Thornton / Getty Izithombe zeBET)
yonakalisa ralph abalinganiswa umdlalo wevidiyo
jane uhlobo lwentombi oluyintombi
inyanga yomatiloshe kunye ne-venus yolwandle
Iintliziyo zeelekese zenethiwekhi zangaphakathi
UDavid o. URussell rant